Turkiga oo qorsheynaya inuu saldhig dayax gacmeed ka hirgaliyo Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Turkiga oo qorsheynaya inuu saldhig dayax gacmeed ka hirgaliyo Soomaaliya
Dalka Turkiga ayaa wadahadallo kula jira seddex dal oo aan la wada carrabaabin kuwaas oo uu ka doonayo inay ka taageeraan hirgalinta saldhig hawada sare ah oo ay ka yegleelaan Soomaaliya.
ANKARA, - Isaga oo la hadlayay Wakaaladda Wararka Sputnik, kana qeyb galayay Shirka Caalamiga ee Sahaminta Hawada ee ka dhacay St Petersburg, intii u dhaxeysay 14 ilaa 18-kii Juun, Serdar Huseyin Yildirim, oo ah Madaxa Wakaaladda Hawada Turkiga, waxuu si maldahan u sheegay in Ruushka uu ku lug leeyahay mashruucan oo ku kacaya hal Bilyan oo doolar.
Bishii Feberaayo ee na weydaaratay ayaa la soo weriyey inay Dowladda Turkiga ka fekerayso dhismaha saldhig Hawada ah oo ay ka yagleesho Soomaaliya, taasi oo qeyb ka ah qorshe ay ku bixi doonto lacag dhan hal bilayan oo Dollar oo lagu horumarinayo Barnaamijka Sahminta Hawada Sare.
Erdogan wuxuu la kulmay SpaceX iyo CEO-ga shirkadda Tesla, Elon Musk, si uu ugala hadlo qorshayaasha tikniyoolajiyadda hawada ee Turkudu wadaan. Waxaa sidoo kale wadahadalo lala yeeshay Roscosmos, Wakaaladda Hawada Ruushka.
Yildirim wareysi uu siiyay Sputnik sanadkii hore wuxuu carabaabay in wakaaladda hawada sare ee dalka Turkiga ay ka shaqeyneyso ku dhowaad 30 mashruuc oo kala duwan, ayna wadahadallo la yeelatay ilaa 20 dal oo ku saabsan is kaashiga hawada sare, kuwaas oo ay ka mid yihiin waddamada Ukraine, Kazakhstan, Russia, Japan, China, Pakistan, Hindiya iyo Azerbaijan.
Dalka Turkiga ayaa saxiib dhow la ahaa Soomaaliya 10-kii sano ee lasoo dhaafay, Hoggaamiya Turkiga ayaana mudadaas labo mar booqday Soomaaliya, sanadkii 2011-kii, xilligaasi oo uu noqday Rai'sal wasaarihii ugu horeeyay ee aan Afrikaan aheyn ee booqda Muqdisho tan iyo markii ay burburtay Dowladdii dhexe iyo sanadkii 2015 isagoo Madaxweyne ah.
Turkigu, wuxuu Soomaaliya ku leeyahay Safaaradda ugu weyn, wuxuu waddanka ka dhisay xerada tabaradda Ciidamada ee Turkisom oo lagu soo saaray dhalinyaro badan oo ka mid noqday ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya.